Moe Hein, Author at
wordpress.com နဲ့ wordpress.org ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ?
WordPress ဆိုတာ Website လုပ်သူတွေ တော်တော်များများကတော့ သိပြီးသားပါ။ Content Management System နဲ့ Website တစ်ခုကို အလျင်မြန်ဆုံးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Developer မဟုတ်တဲ့ သာမန် User တွေကိုယ်တိုင် WordPress နဲ့ Website တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ WordPress မှာ .com နဲ့ .org ၂ မျိုးကွဲပြားပါတယ်။
Posted by Moe Hein/ မေ 18, 2018/ Blog/0Comment
Facebook စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သူတွေကို ဘယ်လိုတိုင်ကြားမလဲ?
ယခုတလော Facebook လူမှုကွန်ယက်မှာ Facebook စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်တာတွေ အများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ Facebook သုံးသူတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာ၊ အနိုင်ကျင့်တာ၊ အသက်မပြည့်သေးသူတွေကို လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်တာ စတဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Facebook စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သူတွေကို ဘယ်လိုတိုင်ကြားမလဲဆိုတာကို လေ့လာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို Facebook ရဲ့ တရားဝင် Page ဖြစ်တဲ့ Facebook Safety
Posted by Moe Hein/ မေ 14, 2018/ Blog/0Comment
Facebook, Twitter, Email တွေအတွက် စာလုံးပုံစံအလှလေးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်
ယနေ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ Facebook, Twitter, Email တွေဟာ လူတိုင်းနဲ့ မစိမ်းတော့ပါဘူး။ နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook, Twitter မှာ Post တွေတင်တယ် Email တွေပို့ကြပါတယ်။ ယနေ့တင်ဆက်မယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Facebook, Twitter, Email တွေအတွက် စာလုံးပုံစံအလှလေးတွေနဲ့ အလှဆင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနည်းလမ်းကို Facebook, Twitter, Email တွေမှာ
Posted by Moe Hein/ မေ 9, 2018/ Blog/0Comment
Facebook မှာ ထိရောက်တဲ့ Event တွေ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ?
Posted by Moe Hein/ မေ 8, 2018/ Blog/0Comment
Facebook ပေါ်မှ သင်၏ Browsing History များကို ရှင်းလင်းနိုင်တော့မည်
Posted by Moe Hein/ မေ 7, 2018/ Blog/0Comment
ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ SMS စာတွေ ခဏခဏပို့နေတာကို ဘယ်လိုတားဆီးရမလဲ?
အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတယ်ဆိုပေမယ့် နည်းပညာနဲ့ အလှမ်းဝေးနေသူတွေ အဖို့တော့ အချက်မသိတော့ လုပ်ရခက်တယ်၊ လုပ်လို့မရဘူးပဲထင်ကြမှာပါ။
နိုင်ငံတကာမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Arduino နည်းပညာ
Arduino ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာမှာ အရမ်းကို ခေတ်စားနေတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။ Arduino ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် Electronic Project လုပ်တဲ့အခါ ပိုမိုအဆင့်မြင့်စွာ လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ Electronic Project တွေအတွက် Arduino ဟာ အကောင်းဆုံး Controller တစ်မျိုးလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။
Arduino ဟာ Open Source Computer Hardware နဲ့ Software ကုမ္ပဏီ၊
Posted by Moe Hein/ မေ 3, 2018/ Blog/ 1 Comment
Digital Marketing အတွက် KPI တွေ ဘယ်လိုချမှတ်မလဲ?
ယနေ့ခေတ်မှာ KPI ဆိုတဲ့ စကားလုံး တော်တော်များများ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် KPI နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာကြပါတယ်။ Digital Marketing မှာလည်း KPI တွေ စနစ်တကျ ချမှတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Digital Marketing အတွက် KPI တွေ ဘယ်လိုချမှတ်မလဲ ဆိုတာကို လေ့လာတင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Moe Hein/ ဧပြီ 30, 2018/ Blog/0Comment
iPhone X နဲ့ Samsung Galaxy S9 တို့ နှိုင်းယှဉ်ချက်
Apple iPhone X မှာသုံးတဲ့ Processor က
Posted by Moe Hein/ ဧပြီ 26, 2018/ Blog/0Comment
Facebook အသုံးမပြုတဲ့ အချိန်မှာ လူတွေဆီက Data တွေ ဘယ်လိုရယူနေလဲ?
လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် Facebook ရဲ့ အဓိက အားသာချက်က Data ဖြစ်ပါတယ်။ Interest, Behaviour စသော Demographic Data များကြောင့် Facebook မှာ Marketing လုပ်တဲ့အခါ ထိရောက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ Facebook အသုံးမပြုတဲ့ အချိန်မှာ လူတွေဆီက Data တွေ ဘယ်လိုရယူနေလဲဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook အသုံးမပြုတဲ့အချိန် Data
Posted by Moe Hein/ ဧပြီ 25, 2018/ Blog/0Comment